VOA ရေဒီယိုညပိုင်း ဇန်နဝါရီ၂၄၊၂၀၂၂။ - ဇန်နဝါရီ 24, 2022
ရုပ်သိမ်းမယ့်ရေနံကုမ္ပဏီတွေနေရာ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်လုပ်မည်လို့ စစ်ကောင်စီပြော၊ မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်ဘီယာ သယ်ပို့ရောင်းဝယ်မှု ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကျဆင်း၊ မတူပီ-မင်းတပ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်က ကျေးရွာ၁၀ရွာ စစ်ပြေးနေရ .. စတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမှာတော့ သတင်းထောက်မှတ်စု၊ စီးပွားရေး၊ ဘလော်ဂါတွေပြောသမျှနဲ့ သက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာတွေကို ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ရုပျသိမျးမယျ့ရနေံကုမ်ပဏီတှနေရော မိတျဖကျနိုငျငံတှနေဲ့ဆကျလုပျမညျလို့ စဈကောငျစီပွော၊ မွနျမာစဈတပျပိုငျဘီယာ သယျပို့ရောငျးဝယျမှု ကခငျြပွညျနယျတှငျးကဆြငျး၊ မတူပီ-မငျးတပျ ပွညျထောငျစုလမျးမပျေါက ကြေးရှာ၁၀ရှာ စဈပွေးနရေ .. စတဲ့ သတငျးတှနေဲ့ အပတျစဉျကဏ်ဍတှမှောတော့ သတငျးထောကျမှတျစု၊ စီးပှားရေး၊ ဘလျောဂါတှပွေောသမြှနဲ့ သကျတနျ့ရောငျသတငျးလှာတှကေို ထုတျလှငျ့တငျဆကျပေးပါမယျ။
VOA ရေဒီယိုညပိုင်း ဇန်နဝါရီ၂၃၊၂၀၂၂။ - ဇန်နဝါရီ 23, 2022
အာဆီယံ ဘုံ ၅ချက် စစ်ကောင်စီလမ်းပြမြေပုံနဲ့ မပတ်သက်သင့်ဟု အင်ဒိုတုန့်ပြန်၊ ကနီမြို့နယ်တွင်းကျေးရွာနှစ်ရွာ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး နေအိမ်တချို့မီးလောင်၊ ယူကရိန်းအစိုးရအပြာင်းအလဲလုပ်ဖို့ ရုရှားကြိုးပမ်းနေဟု ဗြိတိန်စွပ်စွဲ ..စတဲ့သတင်းတွေနဲ့ အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမှာ ကမ္ဘာ့မြန်မာ့မီဒီယာမြင်ကွင်း၊ မြန်မာပြည်မှပေးစားများ၊သတင်းထဲက သုတနဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားသတင်းများတို့ကို ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အာဆီယံ ဘုံ ၅ခကျြ စဈကောငျစီလမျးပွမွပေုံနဲ့ မပတျသကျသငျ့ဟု အငျဒိုတုနျ့ပွနျ၊ ကနီမွို့နယျတှငျးကြေးရှာနှဈရှာ တိုကျခိုကျခံရပွီး နအေိမျတခြို့မီးလောငျ၊ ယူကရိနျးအစိုးရအပွာငျးအလဲလုပျဖို့ ရုရှားကွိုးပမျးနဟေု ဗွိတိနျစှပျစှဲ ..စတဲ့သတငျးတှနေဲ့ အပတျစဉျကဏ်ဍတှမှော ကမ်ဘာ့မွနျမာ့မီဒီယာမွငျကှငျး၊ မွနျမာပွညျမှပေးစားမြား၊သတငျးထဲက သုတနဲ့ ထူးခွားဆနျးပွားသတငျးမြားတို့ကို ထုတျလှငျ့တငျဆကျပေးပါမယျ။
VOA ရေဒီယိုညပိုင်း ဇန်နဝါရီ၂၂၊၂၀၂၂။ - ဇန်နဝါရီ 22, 2022
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရုပ်သိမ်းမှုတိုးလာ၊ ချင်း တီးတိန်တွင် လေယဉ်အကူသုံးရတဲ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်၊ ယူကရိန်းလုံခြုံရေး ကန်အကူအညီများ စတင်ရောက်ရှိ. စတဲ့သတင်းတွေနဲ့ အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမှာတော့ ဒို့အသံ၊ ဒီမိုကရေစီ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာနဲ့ တပတ်အတွင်း မြန်မာ ကမ္ဘာ သတင်းအနှစ်ချုပ်တွေကို ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။
စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျ ပွညျပရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြား ရုပျသိမျးမှုတိုးလာ၊ ခငျြး တီးတိနျတှငျ လယေဉျအကူသုံးရတဲ့အထိတိုကျပှဲပွငျးထနျ၊ ယူကရိနျးလုံခွုံရေး ကနျအကူအညီမြား စတငျရောကျရှိ. စတဲ့သတငျးတှနေဲ့ အပတျစဉျကဏ်ဍတှမှောတော့ ဒို့အသံ၊ ဒီမိုကရစေီ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ ခတျေပွိုငျကမ်ဘာနဲ့ တပတျအတှငျး မွနျမာ ကမ်ဘာ သတငျးအနှဈခြုပျတှကေို ထုတျလှငျ့ပေးဖို့ရှိပါတယျ။
ဗွီအိုအေ သောကြာည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နာရီ ရေဒီယို/ရုပ်သံလွှင့်အစီအစဉ် - ဇန်နဝါရီ 21, 2022
TOTAL နဲ့ Chevron ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့အတူ မြန်မာ၊ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ၊ လူမျိုးစုအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ရဲ့ နိုင်ငံတကာကို တောင်းဆိုချက်၊ လွိုင်ကော်ဘက် ဒီကနေ့တိုက်ပွဲ နောက်ဆုံးအခြေအနေ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းမကြီးတလျှောက် ကျေးရွာသားတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီကနေ့ တရားခွင်အခြေအနေ။ သီတင်းပတ်စဉ် - အမျိုးသမီးကဏ္ဍ၊ သုတစုံလင် အမေရိကန်တခွင်၊ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ။
ဗှီအိုအေ သောကွာည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နာရီ ရဒေီယို/ရုပျသံလှငျ့အစီအစဉျ
TOTAL နဲ့ Chevron ရနေံကုမ်ပဏီကွီးတှေ မွနျမာနိုငျငံက ထှကျတော့မယျဆိုတဲ့ သတငျးနဲ့အတူ မွနျမာ၊ ဒသေတှငျးနဲ့ နိုငျငံတကာသတငျးမြား၊ လူမြိုးစုအဖှဲ့သုံးဖှဲ့ရဲ့ နိုငျငံတကာကို တောငျးဆိုခကျြ၊ လှိုငျကျောဘကျ ဒီကနတေို့ကျပှဲ နောကျဆုံးအခွအေနေ၊ ရနျကုနျ-မန်တလေး ကားလမျးမကွီးတလြှောကျ ကြေးရှာသားတှေ ကွုံတှရေ့တဲ့ဒုက်ခ၊ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဒီကနေ့ တရားခှငျအခွအေနေ။ သီတငျးပတျစဉျ - အမြိုးသမီးကဏ်ဍ၊ သုတစုံလငျ အမရေိကနျတခှငျ၊ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာ။
ဗွီအိုအေ ကြာသပတေးည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နာရီ ရေဒီယို/ရုပ်သံလွှင့်အစီအစဉ် - ဇန်နဝါရီ 20, 2022
လွိုင်ကော်တိုက်ပွဲကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ခရီးစဉ်ရဲ့ တိုးတက်မှု ထိခိုက်ရတယ်လို့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေး ဌာနက ပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူ မြန်မာ၊ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ၊ အိုင်စီဂျေမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ခုခံ ချေပခွင့်ရဖို့ NUG နဲ့ စစ်ကောင်စီတို့ အပြိုင်တင်သွင်းထား၊ သထုံဘက်မှာ ရဲစခန်းဝင်ပစ်သူတွေနဲ့ စစ်တပ် ထိပ်တိုက်တိုးပြီး ပစ်ခတ်လို့ တဦးသေဆုံး တဦးဖမ်းခံရ၊ မင်းတပ်မှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပညာသင်ကြားနေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ Sean Turnell ပါ ၅ ဦးအမှု တရားလိုတဦးထွက်ဆို။ သီတင်းပတ်စဉ် - မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်ချက်၊ ကျန်းမာရေး၊ တိုင်းရင်းသတင်းလွှာ။
လှိုငျကျောတိုကျပှဲကွောငျ့ ဝနျကွီးခြုပျဟှနျဆနျခရီးစဉျရဲ့ တိုးတကျမှု ထိခိုကျရတယျလို့ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံခွားရေး ဌာနက ပွောလိုကျတဲ့သတငျးနဲ့အတူ မွနျမာ၊ ဒသေတှငျးနဲ့ နိုငျငံတကာသတငျးမြား၊ အိုငျစီဂမြှော မွနျမာနိုငျငံကိုယျစားပွု ခုခံ ခပြေခှငျ့ရဖို့ NUG နဲ့ စဈကောငျစီတို့ အပွိုငျတငျသှငျးထား၊ သထုံဘကျမှာ ရဲစခနျးဝငျပဈသူတှနေဲ့ စဈတပျ ထိပျတိုကျတိုးပွီး ပဈခတျလို့ တဦးသဆေုံး တဦးဖမျးခံရ၊ မငျးတပျမှာ ကိုယျထူကိုယျထ ပညာသငျကွားနေ၊ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ Sean Turnell ပါ ၅ ဦးအမှု တရားလိုတဦးထှကျဆို။ သီတငျးပတျစဉျ - မွနျမာ့အရေးသုံးသပျခကျြ၊ ကနျြးမာရေး၊ တိုငျးရငျးသတငျးလှာ။
VOA ရေဒီယိုညပိုင်း ဇန်နဝါရီ၁၉၊၂၀၂၂။ - ဇန်နဝါရီ 19, 2022
မြန်မာအမျိုးသမီးရေး ကုလမဟာမင်းကြီး လုံခြုံရေးကောင်စီမှာပြောဆို၊ ICJ မြန်မာအမှု ဖေဖေဝါရီလကုန်ကြားနာမည်၊ ကယားတိုက်ပွဲ လေကြောင်းဗုံးကြဲမှုကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေထိခိုက်သေဆုံး စတဲ့သတင်းတွေနဲ့ အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမှာတော့ လူထုနဲ့ကျန်းမာရေး၊ သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ အားကစားအစီအစဉ်တွေ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
မွနျမာအမြိုးသမီးရေး ကုလမဟာမငျးကွီး လုံခွုံရေးကောငျစီမှာပွောဆို၊ ICJ မွနျမာအမှု ဖဖေဝေါရီလကုနျကွားနာမညျ၊ ကယားတိုကျပှဲ လကွေောငျးဗုံးကွဲမှုကွောငျ့ ဒုက်ခသညျတှထေိခိုကျသဆေုံး စတဲ့သတငျးတှနေဲ့ အပတျစဉျကဏ်ဍတှမှောတော့ လူထုနဲ့ကနျြးမာရေး၊ သတငျးသုံးသပျခကျြနဲ့ အားကစားအစီအစဉျတှေ ထုတျလှငျ့တငျဆကျပေးပါမယျ။